Dalxus Media Group » XASAASI DHAGEYSO: Mareykanka oo Ciidamadiisa Kala baxaya Soomaaliya & SababtaDalxus Media Group
XASAASI DHAGEYSO: Mareykanka oo Ciidamadiisa Kala baxaya Soomaaliya & Sababta
Sida uu daabacay Wargeyska New York Times ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in Aqalka Cad uu qorsheynayo inuu yareeyo ciidamadiisa gaarka ah ee ka howlgala Soomaaliya iyo dalal kale oo dhaca Qaaradda Africa.
Ciidamada Mareykanka gaar ahaan qeybtooda u qaabilsan la dagalanka argagixsisada ayaa ah kuwo badi ka howlgala dalalka Qaaradda Africa, waxaana bixitaanka ciidamada mareykanka uu bilaaban doonaa saddexda sano ee soo socota, sida warka lagu sheegay.
Guud ahaan ciidamo American ah oo tiradoodu ay dhan tahay 6,000 oo askar ayaa ka howlgala dalal dhowr ah oo dhaca qaaradda Afica, sida waaxda Taliska AFRICOM ay sheegtay, waxaana ay isugu jiraan tababrayaal, Taliyayaal iyo ciidamo qaas ah oo qaarkood ay ka howlgalaan Soomaaliya, iyagoo caawinaya ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo kuwa nabad ilaalinta ee loo yaqaano AMISOM oo weeraro ku qaada ururka Al Shabaab.
Howlgalka ugu badan oo Mareykanka uu ka fuliyo Soomaaliya ayaa ah fulinta duqeymo lagu dilo xubno ka tisarn Al shabaab waxaana sanadkii hore uu fuliyay duqeymihii ugu badnaa oo al shabaab lagu garaaco.
Sida uu sheegayo Wargeysyka The Time ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya waxa ay caqabad ku tahay dagaalkii 11-kii sano ee iugu dambeesay lagula jiray ururka Al shabaab oo Soomaaliya ka howlgala.
Sababaha keenay in Mareykanka uu ciidamadiisa kala baxo dalalka Africa ayaa lagu sheegay in ay tahay ciidamada oo lagu dilayo dalalka ay ka howlgalaan iyagoo dagaal kula jira kooxaha mucaraadka, khasaraha dadka shicibka ah oo kordhay iyo hanjabaadaha Military ee Ruushka, shiinaha iyo Iran ka soo yeeraya waxaana uu mareykanka arkaa in joogitaankiisa Africa aaney muhiim u aheyd sida uu qoray, The Times.